आजको राशिफल (वि. सं. २०७८ भाद्र २९ गते, मङ्गलबार) - Rastrakokhabar
आजको राशिफल (वि. सं. २०७८ भाद्र २९ गते, मङ्गलबार)
चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी आउनेछ। शुभचिन्तक र प्रतिस्पर्धीलाई समेत समेटेर काम लिनुपर्ने समय छ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ। हल्लाको पछि लाग्दा दुःख पाइनेछ। तर तत्काल लाभ नभए पनि समस्या सुल्झाउन सकिनेछ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। समस्या दर्साउँदा साथीभाइकाे सहयाेग जुट्नेछ।
प्रतिस्पर्धीहरू किनारा लाग्नेछन् भने मुद्दामा पनि विजयी भइनेछ। रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। संघर्ष गरेरै अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काममा फाइदा हुनेछ। तर काममा बलजफ्ती गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ। शुभचिन्तकहरू टाढिनेछन् र फजुल खर्च पनि बढ्नेछ। धनमाल सुरक्षामा सजग रहनुहाेला।
विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। कामले वादविवाद निम्त्याए पनि उद्योग र व्यापारमा फाइदा हुनेछ। प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। तर, गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ। महत्त्वाकांक्षी योजना गाेप्य राखेर अघि बढ्नुहाेला।
अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सुखद् समाचारले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउन सक्छ। बौद्धिक अभिव्यक्तिको तारिफ हुनेछ। अनावश्यक वादविवादबाट भने टाढै रहनुहाेला।
सफलताले हिम्मत दिलाउनेछ। प्रयत्न गर्दा राम्रै काममा जग बसाउने मौका छ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ होला। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। भेटघाटले समेत उत्साह बढाउला। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। मान–सम्मान प्राप्त होला। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। घरपरिवारमा भने असमझदारी बढ्नेछ।
आजको राशिफल ( वि. सं. २०७८ असोज ३ गते, आइतबार)
आजको राशिफल ( वि. सं. २०७८ असोज २ गते, शनिबार)
आजको राशिफल ( वि. सं. २०७८ असोज १ गते, शुक्रबार )
आजको राशिफल ( वि. सं. २०७८ भाद्र ३१ गते, बिहीबार )
आजको राशिफल ( वि. सं. २०७८ भाद्र ३० गते, बुधबार )